Mudane ra’isul wasaare, hebel oo ah xildhibaan ahna wasiir waa waxaan eednay. | Codka Shacabka Soomaaliyeed
Waxaa laga yaabaa inaad u qaadato duruufaha adag ee aad ku shaqeyneyso in ummadda Soomaaliyeed aysan la soconnin, balse waxaan kuugu bishaareynayaa inaan ognahay inaad tahay sidii, hashii ninka gurrani soo hooyay, oo aan ula jeedo in labada dhinacba lagaa heysto oo lagaa eedeynaayo, waxaanse hubaa hebel oo ah ahna, inaysan xal waara u noqon doonin ummadda Soomaaliyeed, waxa kaliya oo ay ka fiirsanaayaanna ay tahay mushaarka dhowrka dhinac ah oo ay xildhibaanada wasiiradana ah qaadanayaan oo aysan u jeedin inay wax ka qabtaan dhibaatada heysada ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan.
Taas waxaa daliil u ah, dadkii lagu soo qanciyay in iyaga laga dhigaayo wasiiro oo hadda waayay, shalayna wax ka riday dowladdii ay ka tirsanaayeen, maanta waxa ay ku lee yihiin ummada danahooda ayaan ka shaqeyneynaa, waase markii ay iyagu waayeen, sidaas darteed ma ansixinayno wasiirada la soo wado haddii aan annagu iska weyno. Alla qayaano badanaa!!!!!
Bal fiiri Raisul wasaare, xildhibaanadani waxa ay ku yimaadeen qaab qabiil oo ay weliba soo boobeen dadkoodi, waxa ayna u badan yihiin kuwo aan lagu qanacsaneyn oo aan weliba aanan wax weyn u qaban dadkii ay metelayeen, oo waxaa xaqiiq ah, haddii maanta ay suurta gal tahay in la codeeyo inuusan mid koodaa uusan helaynin codka dadka uu metelo, maantase waxa ay rabaan inay isku darsadaan, xubinnimadii baarlamaanka iyo weliba tii wasiirnimada, maxaa diidaaya inay mid ku ekaadaan oo ay weliba howshaas ka soo dhalaalaan si dalka iyo dadkaba loo horumariyo.
Waxaa dalka ku soo wada noqday dhalinyaro badan oo aqoon dheeri ah u leh howlaha maamul. Qaar badan oo ka mid ah xildhinbaanno ma ahan, waxa ay heystaan darajooyinka ugu sarreeya maadooyinka heerka jaamacadeed ah ee ay muddada badan ku soo dadaalayeen. Maxaa diidaaya in iyagaas loo dhiibo xilalka wasiirnimada, si ay ugu shaqeeyaan cilmiyada ay soo barteen una horumariyaan wasaaradaha loo dhiibo?
Mudane raisul wasaare, maanta awood qeybsigu waa inuusan keenin in in yari xoobsato wax kasta oo dadka Soomaaliyeed loogu talo galay, oo in yar ay isku noqoto, xildhibaan, wasiir, wasiir ku xigeen, inta ay rabaanna ay geystaan meelo kale. Mudane raisulwasaare, hebel oo ah, ahna waa cadaalad darro, waana waxa keenay in ay soo noqnoqdaan tobanka qof ee dalka dib u dhigay oo iyagu maalinba shaati soo gashta, sida kaliya oo looga bixi karo, oo aanan lagaaga hor imaan Karin waa in aad dhamaan wasiiradda, wariir ku xigeennada iyo wasiir u dowlayaasha aad dibadda Baarlamaanka aad ka keento. Mudane raisulwasaare, haddii aad saas yeesho waxaad ka badbaadeysaa eedeymaha labada dhinac amaba seddexda dhinac kaaga imaanaaaya, waxeyna billow fiican u noqon doontaa, qaababka loo soo xulaayo dowladaha kaa danbeyn doona.
Dowladda aad hadda la noqotay, waxaad sabab uga dhigtay inaad soo celisay, howlo ay horay u wadeen oo aad isleedahay ha dhameeyaano! Mudane waa yaabe maxaa wasiir Baafo looga waayay wasiiradaada, haddii ay sax tahay waxa aad sheegeyso? Mudane waan ognahay in lagugu qasbaayo wax badan, balse maanta waxa ay mareysaa YAA MAALI JIRAYEY? Haddii aad joogto waa la igu qasbay kaliya, kama fiicnaan doontid labadii ra’isul wasaare oo denbi la’aanta loo isticmaalay wasiiraddii markii horayba sidaadoo kale lagu soo qabay.
Maanta waxa aad heysataa fursad cad oo qof kasta oo siyaasadda indha indheeya uu arki karo. Ma u baahnid inaad ka fikirto qof wasiir noqda, waa inaad ka fikirtaa qorshe qarankaan wax u noqon kara iyo xilkasyaal aqoon u leh waxa aad ku aaminayso diyaarna u ah inay garabkaada istaagaan si loo samata bixiyo, dalkaan iyo dadkaan duruufaha adagi diloodeen. Waa inaadan u soo celin kuwii riday labadii dowladood ee kaa horeeyay, waana inaad dhamaan wasiiradu ay noqdaan kuwo aan xil kale heynin si ay ugu gacmo furnaadan horumarinta howlaha aad u dhiibeyso. Labo mushaar fiirsigu waa waxa dadka iyo dalka dib u dhigay. Mudane, ha ku dhicin dabinkii ay Saacid iyo Cabdiweli ku dhaceen. Kuwa maanta ku leh annagaa waxaa rabto yeelayna, waa kuwa ugu horeeya ee kaa horimaan doona, ka fiirso oo keen dad la og yahay wadaniyadooda iyo how karnimadooda, hal xildhibaanna ha ku soo derin dowladda aad soo dhisi doonto.
« Macallimka oo qiimo loo yeelo, ayaa qeyb weyn ka qaadan kara xasilloonida iyo horumarka dalka.
Haa, Haddii uu Raisulwasaaruhu aqbalay codsigii xildhibaanada, Maxaa Xildhibaanada ku waajib ah? »